Shaadhka jeesjeeska | Hal-abuurka Online
¿Estás buscando ku jeesjees ah funaanado bilaash ah oo lagu xayeysiiyo dukaankaaga onlaynka ah? Ma haysaa macmiil kaa codsaday inaad naqshadayso funaanad oo aad rabto inaad ku tusto shaadhka shaadhka oo soo jiidan doona? Markaa ma haysatid wax kale oo aan ahayn inaad raadiso kuwa ugu fiican si aad u heli karto haddii aad u baahan tahay ama in mashruucan oo kale uu kuu yimaado.
Laakin meeye shaadhka shaadhka? Ma fududahay in la helo maaweelo funaanad bilaash ah? Sida ugu fudud oo aan u sii wadno akhrinta waxa aan kuu diyaarinay sababtoo ah waxaad awoodi doontaa inaad hesho ururinta tusaalooyin badan si aad u soo dejiso kuwa aad jeceshahay ama kuwa loo isticmaali karo shaqadaada. Ma bilaabaynaa?
1 Xulashada shaadhka bilaashka ah
1.2 majaajilo funaanad laablaaban
1.3 Funaanad Soo Bandhigida Heather
1.4 Ku jees jeeska funaanadaha midabada kala duwan
1.5 Geedka PNG
1.6 Maaweelada shaadhka dumarka
1.7 Adduunka Majaajilada
1.8 Maadays shaadhka ragga
1.9 Qaabka shaadhka ee dhinacyada oo dhan
1.10 Majaajilo funaanad ah oo beddeleysa midabka iyo naqshadeynta
1.11 Funaanad ku taal asalka alwaax
1.12 Jees-jeeska taangiga
1.13 jeesjeeska xeebta
1.14 Funaanad gacmo dheer oo shaadh ah
1.15 Qaabka shaadhka carruurta
1.16 Qaabka shaadhka ee kuwa yaryar
1.17 Funaanad gacmo dheer iyo gacmo gaaban
1.18 Qaabka Polo ee jeesjeeska
Xulashada shaadhka bilaashka ah
Sida aan ognahay in marar badan oo leh shan ama lix tusaale aysan ku filneyn, markan waxaan sameynay iskudubarid inta ugu ballaaran ee suurtogalka ah si aan ku siinno doorashooyin kala duwan oo aad kala dooran karto. Dhammaantood waad awoodaa ku soo dejiso bilaash hadaba waqtigaaga ha lumin oo bilow inaad eegto kuwa aad jeceshahay.
Waxaan ku bilownay, ma aha tusaale, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah tan iyo markii aan tagnay Freepik, mid ka mid ah Bangiyada sawirada bilaashka ah oo aad ka heli karto internetka.
Halkan waxa aad ka heli doontaa agabyo maaweelo ah oo funaanad ah oo aad ka dooran karto. Miyaadan rumaysan? Waa hagaag eega isku xirka.
majaajilo funaanad laablaaban
Halkan waxa aad ku haysaa sawir aad si toos ah uga habayn karto mareegaha si aad u soo dejiso. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa dhar kala duwan, sida haddii aad diyaarinayso shandad, iyo dhexda shaati laalaaban oo aad ku dhejin karto sawirka.
Ku habboon shaqooyinka safarka. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Funaanad Soo Bandhigida Heather
Ikhtiyaarka kale ee aad haysato waa shaadhkan oo aad ku soo bandhigi karto naqshadeynta shaadhka oo furan, laalaaban oo aad u laalaaban. Faylka waxaa loogu talagalay Photoshop CC 2015 laakiin waa hubaal inuu u shaqeeyo noocyada kale ee barnaamijka.
Ku jees jeeska funaanadaha midabada kala duwan
Hadaad rabto inaad aragto sida calaamadda ama naqshadda funaanaddu ay ugu ekaan lahayd midabo kala duwan, Tani waxay laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu muujiyo, sababtoo ah waxaad ku arki kartaa midabada aasaasiga ah.
Soo Degso Halkan.
Tani waa bangi sawir oo kale oo bilaash ah, oo aan si fiican loo aqoon sida kuwa kale, laakiin waxay leedahay shaati-gacmeedyo majaajillo ah, laakiin ku habboon inay tusto naqshadda aad u sameyso macaamiishaada.
Xitaa Waxaa loo isticmaali karaa dukaankaaga internetka maadaama ay leedahay naqshado qaarkood oo u muuqda in laga soo qaatay dukaamada dharka.
Waxaad soo dejisan kartaa Halkan.
Maaweelada shaadhka dumarka
Inta badan maaweelada shaadhka ah ee laga helo internetka inta badan waa kuwa ragga. Laakiin taasi macnaheedu maaha in aanay naag jirin. Waxaan halkan ku haynaa tusaale cad, oo leh Shan shaati oo dumar ah oo tayo sare leh oo macquul ah si aad u muujiso sida nashqadaadu u eegi lahayd iyaga.
Haa, taasi waa sax, adduunka majaajilada iyo, dabcan, waxaad sidoo kale la kulmi doontaa Qaababka funaanadaha bilaashka ah si aad ufuliso naqshadahaaga.
Iska hubi Halkan.
Maadays shaadhka ragga
Ma rabtaa shaadh qof xidhan yahay? Hagaag hadda waad heli kartaa, oo ku habboon inaad muujiso in naqshadayntaadu si fiican ula qabsato jirka. Dhab ahaantii, waad awoodaa asal ama saldhig u geli naqshadaada.
Si loo soo dejiyo? Booqo kan isku xirka.
Qaabka shaadhka ee dhinacyada oo dhan
Haddii waxa lagu waydiiyey ay tahay inaad naqshadayso funaanad hore iyo gadaalba, tani waa mid ka mid ah maaweelada funaanadda ee aad muujin karto, maadaama Waxay ku siinaysaa muuqaalka hore, dhinac iyo gadaal.
Si aad u soo dejiso booqo Halkan.
Majaajilo funaanad ah oo beddeleysa midabka iyo naqshadeynta
Tani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican, sababtoo ah kuma siinayso hal midab oo shaati ah, laakiin dhowr ka mid ah. Maxaa intaas dheer, waxaad ku dhejin kartaa astaanta matt ama gloss, taas oo ka caawisa in la helo fikrad ah sida ay u ekaan lahayd xaqiiqada.
Wax la mid ah in bilaash lagu soo dejiyo Halkan.
Funaanad ku taal asalka alwaax
Waxaan la soconaa naqshad kale oo aad ku bedeli karto midabka shaadhka oo aad ku dari karto astaanta ama naqshadeynta aad u samaysay macmiilkaaga, ama si aad u muujiso alaabtaada. Waxaad heli doontaa faylka PSD si aad ugula shaqeyso Photoshop. Sidoo kale, waxaad leedahay suurtogalnimada in la dhigo hore iyo gadaalba.
Tani waa mid ka mid ah majaajilada aan si fudud loo helin, laakiin haddii aan wax yar eegno waxaad heli kartaa. Oo waa in kiiskan shaadhku aanu ahayn gacmo-gashi, laakiin ganaaxyo.
Waxaad u isticmaali kartaa mid shaqsi ama ganacsi (had iyo jeer ku xidhidhiyaha shabakada halka aad ka heshay).
Dabcan, waxaad u baahan doontaa Photoshop si aad ula shaqeyso. Soo dejiso bilaash Halkan.
Wixii ah funaanadaha xeebta, ma jiraan wax la mid ah qaabkan oo kuu ogolaanaya inaad si fudud u beddesho isticmaalka. Waxaad isticmaali kartaa 100% waxaana lagu arki doonaa shaadhka xagga hore, xagga dambe iyo sidoo kale laalaabka.
Halkan Waad haysaa. Dabcan, fiiri sababtoo ah waxaa jira funaanado kale oo PSD ah.
Funaanad gacmo dheer oo shaadh ah
In ka badan funaanad, waxay ku dhowdahay inay u egtahay funaanad, laakiin runta ayaa ah in ay tahay doorasho kale, maaddaama naqshadaha aan had iyo jeer loo samayn shaati-gacmeedyo gaaban, waxay sidoo kale noqon karaan kuwo dhaadheer.
Xaaladdan oo kale waxay ku tusi doontaa natiijada ku saabsan haweeneyda waxaadna ku dari kartaa naqshadaada si fudud.
Waxaad u leedahay inaad soo dejiso Halkan.
Qaabka shaadhka carruurta
Yaa yidhi uma baahnid macaamiisha ama isticmaalayaasha si ay u daawadaan funaanadaha xeebta ee carruurta? Hagaag, halkan waxaad ku haysaa tusaale cad oo ah sida a funaanad caruureed majaajilo.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad muujiso hore iyo zoom ee naqshadeynta aad dhigtay.
Qaabka shaadhka ee kuwa yaryar
La xidhiidha kii hore, laakiin kiiskan oo leh qaab yar, waxaad haysataa naqshad t-shirt si naqshaddu waxay u egtahay mid aad uga fiican jirka.
Funaanad gacmo dheer iyo gacmo gaaban
Si aad u heshid labada doorasho, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay inaad siiso macmiilkaaga midkaas eeg naqshadeynta laba funaanad oo kala duwan.
Qaabka Polo ee jeesjeeska
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay shaadhka polo, markaa tani waxay noqon kartaa ikhtiyaar. Haa runtii, waa dano gaar ah oo kaliya, Haddii aad rabto inaad u isticmaasho ganacsi ahaan, waa inaad bixisaa $ 4.
Soo hel Halkan.
Intarneedka waxaad ka heli kartaa maaweelo badan oo funaanado bilaash ah, inkastoo sidoo kale la bixiyo. Markaa haddii kuwa aanu dhignay midkoodna aanu ku qancin, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad wakhti yar ku bixiso sidii aad u heli lahayd mid ku habboon waxa aad uga baahan tahay dukaankaaga, macmiilkaaga ama si aad dadka kale u tusto naqshadahaaga. Ma ku talin kartaa qaar ka mid ah qaababka funaanadda bilaashka ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » maaweelo funaanad